`ပြိုင်ဘက်မရှိ အောင်ဘာလေထီနှင့် ပြည်သူတွေ ဈေးကြီးပေးပြီး ထီထိုးနေရပါတယ်..´ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Myanma News » `ပြိုင်ဘက်မရှိ အောင်ဘာလေထီနှင့် ပြည်သူတွေ ဈေးကြီးပေးပြီး ထီထိုးနေရပါတယ်..´
`ပြိုင်ဘက်မရှိ အောင်ဘာလေထီနှင့် ပြည်သူတွေ ဈေးကြီးပေးပြီး ထီထိုးနေရပါတယ်..´
Posted by winkyawaung on Aug 1, 2011 in Myanma News | 28 comments
သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန်အစိုးရတက်လာပြီး ဆင်းရဲ၊နွမ်းပါး၊မွဲတေမူလျှော့ချရေးအတွက် အထူးစီမံချက်များနဲ့ ဆောင်ရွက်နေတာကို ဝမ်းမြောက်စွာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ စာရေးသူတို့နယ်တွေမှာရော မြန်မာနိုင်ငံ အနှံ့မှာ တစ်လုံး၊ နှစ်လုံး၊ သုံးလုံး တွေ ကင်းစင်အောင် ဆောင်ရွက်နေကြောင်း သတင်းစာ၊ ဂျာနယ်များမှာ နေ့စဉ်လိုလို ဖတ်နေရပါတယ်။ ၂၀၁၁၊ ဇွန်လ ပိုင်းက စတင်ပြီးဆောင်ရွက်လာတာ အများအသိပါ။ ယခု ဇူလိုင်လမှာလည်း အရှိန်မြှင့်တင်ဆောင်ရွက်နေကြောင်း ကြားသိရပြန်ပါတယ်။ အမှန်တကယ်လည်း အောင်မြင်နေတာကို တွေ့မြင်နေရပါတယ်။
ဘာကြောင့်အောင်မြင်နေပါသလဲဆိုရင်..၊ လူတိုင်း လူတို်င်း ချမ်းသာချင်ကြပါတယ်။ တစ်နေ့မှာ ချမ်းသာနိုးနိုးနဲ့ အိမ်ရှင်မရဲ့ မီးဖိုချောင်ဈေးဖိုပါမကျန် တစ်လုံး၊ နှစ်လုံး၊ သုံးလုံးတွေကိုသာ ဝိုင်းပြီးထိုးလာခဲ့ကြတာ အများအသိပါ။ ဒါကြောင့် လူဆင်းရဲ၊ လူမွဲတွေ များပြားလာကြောင်း နိုင်ငံတော်က ကြားသိရလို့ အချိန်အခါမှီ ကယ်တင်လိုက်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ယခုလို တစ်လုံး၊ နှစ်လုံး၊ သုံးလုံးထီတွေ ထိုးမရကြတော့ နိုင်ငံတော်က အောင်ဘာလေထီတွေဘက်ကို အများပြည်သူတွေ အားကိုးလာကြပါတယ်။
နိုင်ငံတော်က အောင်ဘာလေထီတစ်ဆောင်ကို (၂၀၀)ကျပ်ဈေး သတ်မှတ်ရောင်းချပါတယ်။ ထီ(၁၁) ရွက်ပါ (၁၁) စောင် ထီတစ်အုပ်ကို (၂၀၀ဝိ) ထုတ်ဈေးနဲ့ ဖြန့်ချိပေးပါတယ်။ ထီလက်မှတ်ဝယ်ယူခွင့်ရှိသူ ကိုယ်စားလှယ်ကြီး တွေအတွက် ငွေနှစ်ထောင်ကျပ်ဖိုးထီ(၁၀)စောင်ရောင်းပြီးတိုင်း ထီစာအုပ်တစ်အုပ်မှာ ထီတစ်စောင်အပိုပေး၍ ငွေ(၂၀၀) ကျပ် အပိုအမြတ်ငွေ ပေးပြီးသားပါ။ အောင်ဘာလေထီရောင်းပေးသူတိုင်းကို ၁%နှုန်းအမြတ်ပေးထားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အောင်ဘာလေထီ အကြိမ်(၂၇၀) ကစပြီး ယခု အကြီမ်(၂၇၁) ကြိမ်မှာ တော့ ထီတစ်စောင် (၃၅ဝိ) (၄၀ဝိ) အထိ ထီဈေးတွေ တစ်ရှိန်ထိုးတက်လာပါတယ်။ ဘယ်လိုဖြစ်တာလည်းဆိုပြီး စာရေးသူမှ လက်ရှိထီရောင်းချနေသူ ကုန်သည်တစ်ဦးအားမေးကြည့်ခဲ့ပါတယ်။ တစ်လုံး၊ နှစ်လုံးတွေ ပပျောက်ကင်းစင်သွားတော့ အများပြည်သူတွေက အောင်ဘာလေထီကို ဝိုင်းပြီးထိုးလာကြပါတယ်။ အဲဒီတော့ ထီဆိုင်ကြီးတွေက ဝယ်လိုအား များလာပါတယ်။ အောင်ဘာလေဌါနမှ ရောင်းလိုအားကနည်းနေပါတယ်။ ဥပမာပြရရင်တော့ ထီအက္ခရာ အလုံးရေ တိုးမထုတ်ဘဲ အက္ခရာ(၂၄)စောင်၊ (က)အက္ခရာမှ (ဘ)အက္ခရာ အထိသာ ထုတ်ဝေရောင်းချထားတာပါ။ နောက်တစ်ခုက အမှန်တစ်ကယ် ထီဆိုင်ဖွင့်ပြီးရောင်းချနေသူတွေအတွက် အောင်ဘာလေထီဝယ်ယူခွင့်ကို လိုအပ်သလောက် မရကြတာလည်းပါ ပါတယ်။ အောင်ဘာလေ ထီအုပ်စိမ်း တွေကို တဆင့်၊ တဆင့် အမြတ်ပေးပြီး ဝယ်ယူရောင်းချနေရတာတွေလည်း မကောင်းပါဘူး။ (မှတ်ချက်။ အုပ်စိမ်းဆိုသည်မှာ အောင်ဘာလေဌါနမှ ထုတ်ပေးသော ထီလက်မှတ်များဖြစ်ပါသည်။ သိန်းတစ်ထောင်ပေါက်ရင် သိန်းတစ်ထောင်သာရ၍ အပိုဆုမပါသောထီလက်မှတ်များကိုခေါ်ဆိုပါ၏။ ယခု(၂၇၁)ကြိမ်၊ အထူးမင်္ဂလာစုံတွဲခေါ် အက္ခရာစုံ(၂၄)စောင် အပိုဆုမပါ-အုပ်စိမ်းတစ်အုပ်(၆၅၀ဝိ)ထိ ဈေးတက်နေပါသည်။ နိုင်ငံတော်မှ ထုတ်လုပ်ဖြန့်ချိသော အောင်ဘာလေထီကို ဈေးနှုန်းမထိမ်းချုပ်နိုင်ခြင်းမှာ စဉ်းစားစရာများ ဖြစ်နေပါ၏။) ဒါကြောင့် ထီဆိုင်ကြီးတွေကလည်း နိုင်ငံတော်သတ်မှတ်ဈေးအတိုင်း(၂၀၀)ကျပ်နဲ့ မရောင်းကြတော့ပါ။ ထီတစ်စောင် (၃၅ဝိ/၄၀ဝိ)ဈေးနှုန်းတွေတင်ပြီး အပြိုင် အဆိုင် ရောင်းအားကောင်းအောင် အပိုဆုအဖြစ် ငွေကျပ်သိန်း(၁၀၀၀) ပေါက်ရင် အပိုဆုငွေသိန်း(၅၀၀)၊ သိန်း(၆၀၀) နဲ့ကားတစ်စီးပေးမယ်၊ စတဲ့မက်လုံးတွေ အမျိုးမျိုးပေးကြပြီး ထီထိုးသူများကို မြူဆွယ်ပါတယ်။ သူတို့ပေးတဲ့ အပိုဆုတွေကလည်း ထီထိုးသူ ပြည်သူတွေဆီမှ ဈေးနှုန်းတင်ယူပြီး နားလှည့် ပါးရိုက်တဲ့သဘောပါပဲ။ အပြင်ထီလောကမှာ ထီဈေးကြီးနေတာက နိုင်ငံတော်လည်း အခွန်မရပါ။ ထီကုန်သည်ကြီးများနဲ့ ထီခွဲတမ်းရရှိသူ အခွင့်ထူးခံ လူကြီးများ ဖြစ်ကြတဲ့ လူတစ်စုကသာ သူဌေးတွေဖြစ်ကုန်ကြပါတယ်။ ..ဟု ထီထိုးသူများထံမှ ကြားသိလိုက်ရပါတယ်။ လူတစ်စုကောင်းစားရေးအတွက် ပြည်သူလူထု အများမှ ဈေးကြီးပေးနေရတဲ့သဘောဖြစ်နေပါတယ်။ ဒါကြောင့် အောင်ဘာလေထီ ကို အမှန်အကန်ဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ထီထိုးနိုင်ကြပြီး နိုင်ငံတော်ဘဏ်ဏ္ဍာငွေများလည်းတိုးတက်ရရှိလာအောင်၊ ပြည်သူတွေလည်း ချမ်းသာလာအောင်..ယခုလို အခြားတစ်လုံး၊နှစ်လုံး၊သုံးလုံးထီများ ပပျောက်ကင်းစင်နေချိန်မှာ အောင်ဘာလေထီ အား ရောင်းအားပိုမိုတိုးတက်လာစေရန် သက်ဆိုင်ရာမှ လိုအပ်သည်များကိုု ဆောင်ရွက်ပြုပြင် ပေးနိုင်ကြပါစေကြောင်း ဆုမွန်ကောင်းတောင်းရင်းဖြင့်…။
မှတ်ချက်။ ။ ဂျာနယ်အယ်ဒီတာချုပ် တစ်ဦးမှ ဒီစာမူကိုရွေးထားပြီး မသုံးလို့ (ဘာကြောင့်မသုံးလည်းဆိုတာတော့..?။ သူ့လူတွေ…..ဖြစ်..ဖြစ်လို့ပါတဲ့..။ ဟိုက ဒီက ပါးစပ်ပိတ်..ပိတ်တယ်ထင်ပါတယ်။ ) ဒါကြောင့် အများသိအောင် တင်ပေးလိုက်ရပါသည်။
မန ္တလေးဂေဇက် ရွာသားများ ကြားသိနိုင်ကြပါစေကြောင်း..။
မှန်ပါတယ်. .. အဆက်အသွယ်ရှိသူတွေ ဆက်၍ ဆက်၍ ဖြန့်ဝေ ပေးကြစေလိုပါတယ်..
ကျွန်တော်တို့မှာက ကလောင်အားလေးပဲ ရှိတာ…
အပြောင်းအလဲလေးများ ဖြစ်ပေါ်လေ နိုး …ဒို့မျှော်ကိုး….
ဘယ်သူ ကမှ ရိုက် ပေးခိုင်းတာ မဟုတ်တဲ့ အပို ဆု ကို အကြောင်း ပြပြီး ၂၀ဝ ကျပ်တန် ထီလက်မှတ်တစောင် ကို ၂၅ဝကျပ် ကနေ ၃၀ဝကျပ် အထိ အမြတ် တင် ရောင်းတယ်။
ခု ၂ လုံး ၃ လုံး လည်း စီမံချက် လုပ် ရော အကြောင်း ပြ ချက် က ရောင်းအား ကောင်း လို့ဆို ပြီး ၃၅၀၊ ၄၀ဝကျပ် ထိ ဈေးတင်တာတဲ့၊ ရောင်းအား ကောင်းရင် လျော့ ရောင်း သင့်တာ ကို ပြောင်း ပြန် ဖြစ်နေ တဲ့ မြန်ပြည် ဈေး ကွက် လော က တော့………..။
ဝိုင်းရေး ပေးပါ ကွန်းမန့် များများ လေး။
( မှတ်ချက်။ ။ ထီရောင်းသူ များ လည်း ရေးနိုင် သည်။ )
နှစ်လုံး သုံးလုံးပပျောက်တာတော့ ကောင်းပါတယ်
ခုလို ၂၀ဝတန်ထီလက်မှတ်က ဈေးမတရားကြီးနေတာတော့ မကောင်းဘူး
တလောက ထီတစ်စောင် ၃၅ဝနဲ့ ၅စောင်ကို ၁၈၀ဝ ပေးပြီးထိုးခဲ့တယ်
ခုတော့ သိန်း၁၀၀ဝပေါက်ရင် ဘာဆုညာဆုဆိုတဲ့ဆုတွေအတွက် ကုန်ကျငွေက ထီဖိုးအမြတ်နဲ့ယှဉ်ရင် မပြောပလောက်တော့ဘူး
ဒါကြောင့်လည်း အပြိုင်အဆိုင် ပေးနိုင်လာတာပေါ့
ကျွန်တော့် အမြင် ပြောရရင်
နာမည် ရ ၊ နာမည် ကြီး
ထီဆိုင် ပိုင်ရှင် တော်တော် များများ ဟာ
ဒီမြန်မာပြည်သူ ပြည်သား တွေ နဲ ့လုပ်စားပြီး
ဘယ်လောက် တောင် ချမ်းသာနေပြီ လဲ မသိဘူး နော် ။
ခေတ် အဆက်ဆက် အပြင်မှာ ထီ ပေါက်ဈေးဟာ အစိုးရ ထုတ်ဈေး ထက် ၂ ဆ ပေးဝယ်ရတာပါပဲ
အခု ဆိုရင် သိန်း ၁၀၀ဝ ကျပ် ဆုကြီး ပေါက်မှ အပိုဆု သိန်း ၅၀ဝ ပဲ ပေးတာပါ ။
ဒါတောင် ကိုယ့်ဆိုင် က ပေါက်ဦးမှ
ပေါက်လဲ ၊ သိန်း၅၀ဝ ဆိုတာ
ပေးရတဲ့ ဆိုင် ရဲ ့တစ်လ အမြတ်ငွေ ရဲ ့၁ဝ ရာခိုင်နှုန်းတောင် ရှိပ မလား ဆိုတာ စဉ်းစားမိပါတယ်
ဟုတ်တယ် အရင်ကထီတိုးရင် 300လောက်ရတာကို အခုဈေးတွေတက်ပြီး ထိုးချင်စိတ်မရှိတောဘူး
ထီဆိုတာကလည်း အလွန်စားလို ့ကောင်းတဲဂွင်ပေါ ့ဗျာ၊ တကယ် ရောင်းအားကောင်းရင် အက်ခရာ တိုးထုတ်ပေးလိုက်ပါလား၊ ဟင့်အင်းဒါမျိုး ဘယ်တော ့မှမလုပ်ဘူး၊ လောက်လောက်ငှငှဖြစ်သွားရင် ဈေးကစား
လို ့မရတော ့ဘူးလေ၊ ညွန်မှူးက အစ အချီကြီးစားနေမှတော ့ထိုးတဲ ့ပြည်သူတွေ ခံဖို ့ဘဲရှိတယ်၊ အပေါ်က ပြောထားသလို ၁% မဟုတ်ပါဘူး ၁၀% ပေးပြီးသားပါ၊ အဲဒါကို လောဘမသတ်ဘဲ သူ ့ထက်ငါ ဈေးတင်
ရောင်းကြတာ၊ ပြည်သူတွေကလည်းမျှော်လင့်ချက်လေးထားပြီးတော ့ဖွင့်ရက်နီးရင် ဈေးမကြည့်တော ့ဘူး ထိုးတာဘဲ၊ အဲဒီလို အက်ခရာလျှော ့တာက သကြန်လမှာရောင်းရက်နည်းလို ့ဆိုပြီးလျှော့တာ နောက်ပိုင်းလည်းလိုသလောက်မထုတ်ဘဲ နည်းနည်းစီ မှိန်းနေကြတာ၊ အုပ်ချုပ်သူလူကြီးမင်းများသိဖို ့ကောင်းပြီ
အောင်ဘာလေညွန်မှူး ရဲ ့တလဝင်ငွေဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာ၊ သိန်းရာ နီးပါးရှိတယ် ၊ အကြွေကိစ်စလိုဝိုင်းအော်ဖို ့လိုပြီ
ဈေးတင်ရောင်းတာကိုမပြောနဲ ့လေ… 200 တန်ကို 200နဲ့ခင်ဗျား တို ့ရေးမလား အမြတ်မရှိဘဲနဲ ့…
ဈေးသည်တိုင်း အမြတ်လိုချင်လို့ ရောင်းကြတာမှန်း ခင်ဗျားပြောမှ မဟုတ်ဘူး လူတိုင်း သိတယ်။ တော်ရုံတန်ရုံဆို တော်ရောပေါ့ဗျ။ ခုဟာက ဝိသမလောဘ မတော်လောဘ ဖြစ်နေတဲ့ဟာကြီးကို။
၂ လုံး ၃ လုံး ခေတ်ထတုန်းကတော့ ထီရောင်းအား မကောင်းဘူး ဆိုပြီ မယားငယ် တုံးညပ်တဲ့အသံနဲ့ ထီရောင်းတဲ့လူတွေ ညည်းနေကြတယ်။ အခု လူတွေကို အရမ်းဒုက္ခပေးနေတဲ့ နှစ်လုံး သုံးလုံး လျော့ကျသွားပြီ။ ဒီအချိန်မှာ ထီဘက်ကနေ ဈေးနှုန်းအသင့်အတင့်နဲ့ ရောင်းပေးပါလား။ အဲဒါဆို ထီလည်း ရောင်းအားကောင်း၊ ပြည်သူတွေလည်း သင့်တင့်နဲ့ ဈေးနှုန်းနဲ့ အားပေးနိုင်တော့ အဆင်ပြေ။ ဘယ်လောက်ကောင်းသလဲ။
မဟုတ်ဘူး။ ထီဆိုင်တွေက ငါတို့ ဂွင်ထဲရောက်ပြီဟေ့ဆိုပြီး ဆော်တော့တာပဲ။ တနေ့ ရွှေဥတလုံး ဥပေးနေတဲ့ဟာကို မလိုချင်ဘူး။ တခါတည်း ငန်းကို သတ်စားဖို့ပဲ လုပ်နေတယ်။ ဘယ်နှယ့်လုပ်မတုန်း။ ဒီလိုသာ ထီဈေးတွေ ကြပ်ကြပ်ကစား။ ၂ လုံး ၃ လုံးထက် ဆိုးတဲ့လောင်းကစားတွေ ထပ်ပေါ်လာလိမ့်မယ်။ မယုံစောင့်ကြည့်။
ကိုဆူဆိုက်လည်း မယုံရင် စောင့်သာကြည့်။
ဈေးကြီးလည်း ကံပါရင် ထီပေါက်မယ်ဆိုတဲ့အတွေးနဲ့ တစ်လကို အနိုင်နိုင် ထိုးကြည့်နေရတာပါပဲလေ…
ပေါက်အားတွေကောင်း၊ ဆုကြီးတွေရနေတာ ဆိုင်သေးလေးတွေဆီက မဟုတ်ဘူးနော်။
ပေါက်တဲ့ ဂဏန်းတွဲ အတော်တော်များများဟာ ဆိုင်ကြီးတွေအတွက်လို ဖြစ်နေတာလဲ မယုံစရာကြီးဖြစ်မနေဘူးလားဗျာ။
ပေါက်ပင်ဘာကြောင့် ကိုင်းရတယ် ဆိုတဲ့အဖြေကို ရနိုင်ရင် ထီဈေးဘာကြောင့် ကြီးရသလဲဆိုတာလည်း အဖြေရလာမှာပါ။
အံမာမာ….. ပြောရသေးဦးမယ်..။ နှစ်လုံး သုံးလုံးက တစ်ကယ်ပျောက်သွားလို့လား..။ လားလား ….. နားရွက်ဆွဲပြီးတောင်လိုက်ပြလိုက်ချင်သေး….ဟေးဟေးး….. ဘောင်ချာနဲ့ ရောင်းမရတော့ ဟန်းဖုန်းနဲ့ရောင်းတာပေါ့…။ ဘယ်လောက်ဖိုးသိမ်းဦးမလဲ …။ လာခဲ့ ရတယ်..။ တစ်လုံးကတော့ ခုရှစ်လပိုင်း15 ရက်နေ့လောက်ပြန်စမယ်တဲ့ ပြောတာပဲ..။ နှစ်လုံးသုံးလုံးထိုးချင်တဲ့သူက ကိုယ်ပိုင် ဖုန်းတစ်လုံးရှိဖို့ တော့ လိုသတဲ့နော်…။
ထီကိုအပိုဆုပေးတယ်ဆိုတာ သူကမှချဲအကြီးစားပါ ၂လုံးကအကွက်တရာကစားတာ ၃လုံးကအကွက်တထောင်ကစားတာ ထီကျတော့ဂဏန်း၆လုံးနဲ့အက္ခရာ26လုံအနည်းဆုံးကစားတာဆိုတော့အကွက်ဘယ်လေါက်နဲ့ကစားသလဲမှန်းသာကြည့်ကြပေတော့ အစိုးရထီကိုရောင်းယင်ပုံမှန်ရောင်းတဲ့သူကိုအမြတ်၁ဝရာခိုင်နှုန်းပေးပြီးသားပါ ဒါပေမဲ့ထီဝန်ထမ်းတွေကမင်္ဂလာစုံတွဲ မင်္ဂလာမောင်နှံဆိုတဲ့အက္ခရာအစီအစဉ်အတိုင်းရအောင်ဖန်တီးပြီးထီဆိုင်ကြီးတွေကိုပေးတဲ့အတွက်သာမန်ဈေ းထက်ပိုရကြတယ် ဒါကလဲဝန်ထမ်းတွေကလခနည်းတော့အပိုငွေလေးတွေရကြတာပေါ့..များများမတရားစားနေတာကအပေါ်ကရေးထားတဲ့ အောင်ဘာလေညွန်မှူးပါ ထီထိုးတဲ့ပြည်သူတွေဘက်ကကြည့်လိုက်ယင်တော့ အင်မတန်နစ်နာကြပါတယ် အစိုးရကထီရောင်းရငွေရဲ့60ရာခိုင်နှုန်းပြန်ပေးတာပါ ဒါပေမဲ့ ပြည်သူတွေကတစ်စောင်၂၀ဝတန်တဲ့ ထီကို၂၀ဝနဲ့ထိုးရမှ60ရာခိုင်နှုန်းပြန်ရကြတာပါ ၂၀ဝတန်ထီကို၄၀ဝပေးထိုးရယင်တော့30ရာခိုင်နှုန်းဘဲရကြတော့မှာပါ နောက်ဆုံးတော့ပြည်သူတွေဘဲ နာပြီးယင်းနာနေရတာပါ…ကျွန်တော်ကတော့ထီထိုးချင်စိတ်ရှိယင်၂လုံးဘဲထိုးမယ် သူက၇၅..၈၀..ရာခိုင်နှုန်းပြန်ပေးတယ်လေ….
ဖြစ်နေတာတွေက ဈေးကွက်စီးပွားစံနစ် ကို ဦးတည်မလာပဲ၊ ဇီးကွက်ညစာရှာထွက်တဲ့ စံနစ်လို မှောင်ရိပ်ခိုပြီး ထိုးသုတ်စားမှ ဝ မယ့်ခေတ်လို့ကင်ပွန်းတပ်ချင်ပါတယ်။
ဒီတရားဝင် လောင်းကစားကြောင့် ပြည်သူတွေ လောဘသာ ပိုကဲပြီး မွဲလာကြတာပါ၊ အခြေကျ အနေကျ နေရသူ ဘယ်နှစ်ဦး ရှိနေပြီလဲ၊ ဆုထူးတွေ ဘယ်သူတွေက ညီညီမျှမျှရသွားကြသလဲ၊ ဘယ်လို စီးပွားရေးတွေ ထူထောင်သွားနိုင်ကြပြီလဲ၊ အဖြေရှာကြည့်ပါ၊
နောက်ဆုံးအကျိုးအမြတ်သည် ပြည်သူတွေဆီ ဆင်းလာသည်လား၊ နိုင်ငံ အခွန်ငွေတွေ တောင့်တင်းလာပါသလား၊ စဉ်းစားစရာများနှင့် အောင်ဘာလေပါ ခင်ဗျာ။
“ဖြစ်နေတာတွေက ဈေးကွက်စီးပွားစံနစ် ကို ဦးတည်မလာပဲ၊ ဇီးကွက်ညစာရှာထွက်တဲ့ စံနစ်လို မှောင်ရိပ်ခိုပြီး ထိုးသုတ်စားမှ ဝ မယ့်ခေတ်လို့ကင်ပွန်းတပ်ချင်ပါတယ်။” အဲဒီ တင်စားချက်တော့ ခိုက်တယ်ကွာ။
လက်လုပ်လက်စား ကျွန်တော်ကတော့ အောင်ဘာလေ အားမပေးဘူး
၂ လုံးကမှ တော်သေးတယ် ၊ ၂ လုံးထိုးတော့လဲ ချွေးနဲစာလေးက အဖတ်မတင် ၊
ချမ်းသာ ချောင်လည်ချင်တဲ့ လောဘစိတ်နဲ့ အလောင်းအစားလုပ်တာ မကောင်းတာအမှန်၊
သူများနိုင်ငံတွေရဲ့.. ထီ စံနစ်တွေသေသေချာချာလေ့လာပြိး..စံနစ်သစ်တခု လုပ်သင့်တယ်..။
တတ်နိုင်ရင်.. ပြည်နယ်အလိုက်… ထီစံနစ်တွေလုပ်ရမှာပေါ့..။
သယံဇာတအထွက်နည်းတဲ့ ပြည်နယ်(ဥပမာ..ချင်း။ကယားပြည်နယ်)ကို ထီလုပ်ခွင့်လိုင်စင်ချပေးပြိး.. အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလန်းတွေဖေါ်သင့်တာပေါ့…။
ကျွန်တော့ ဥနှောက် တစ်ထွာမပြည့်တစ်ပြည့်လေးနဲ့ပြောရရင် အစိုးရမို့ အထင်ကြီးမိတယ်
အမှားကြီးမှားနေတော့တာပဲ၊ ဘယ်နေရာ ကြည့်ကြည့် စိတ်တိုင်းမကျမိတာ အမှန်၊
ကိုယ့်အိတ်ထဲကို ထည့်မို့ အပြိုင်အဆိုင် လုပ်နေကြတာ၊
အောက်ခြေက နောက်လိုက်ခွေး တွေက ပိုဆိုး၊
အေးအေးလေးဘဲ စကာင်္ပူsweet ထီတို.
ယိုးဒယား ဘတ်၂သန်းထီတို.ဘဲ ထိုးပါ
စလုံးထီ တစောင်ဆို ၃၀၀ဝကျပ်လောက်ဆိုရနေပြီ
မြန်မာနိုင်ငံ မှထီ ကို သူများနိုင်ငံကဲ့သို့ပြောင်းလဲသင့်တယ်။အစိုးရဝန်ထမ်းများ က အဲ့ဒါကိုသိသော်လဲ လူကြီးများ မှ လက်မခံမည်စိုးသော်ကြောင့်မတင်ပြရဲပါ။
မြန်မာနိုင်ငံ မှထီ ကို သူများနိုင်ငံကဲ့သို့ပြောင်းလဲသင့်တယ်။
ကျွန်တော်လည်း အောင်ဘာလေထီစနစ်ဟောင်းကို အမြန်ပြောင်းလို့၊ အမှန်တကယ်ရောင်းအားကောင်းအောင် နဲ့ ပြည်သူတွေလည်း ဈေးချိုချိုနဲ့ ကံစမ်းနိုင်ကြပြီး သူဌေးဖြစ်စေချင်ပါတယ်။ မြန်မာ့အောင်ဘာလေထီ နည်းစနစ်သစ်သို့ ပြောင်းသင့်ပါပြီ..။ ယခုလို ဝိုင်းဝန်းအကြံပြုပေးကြတာကို နိုင်ငံတော်အစိုးရသစ်မှ သမ္မတသုံးဦး နဲ့ ဝန်ကြီးများ ကြားသိကြ၍ စဉ်းစားတော်မူနိုင်ကြပါစေ…။
ဟုက်ပါတယ် လူမှန်းသိကထဲကထီထိုးလာတာ တစ်ခါမှလဲမပေါက်ဘူး ထီကိုယ်စားလှယ်ဆိုင်ကြီးတွေသာချမ်းသာသွားကြတယ် ထီဈေးတွေကတော့ တစ်နိုင်ငံလုံး ဈေးတွေတက်နေတာ အစိုးရထုက်ဈေးအတိုင်းရောင်းပေးရင်ကောင်းမယ်
ကျနော်ကတော့ စင်္ကာပူထီ toto လိုမျိုးနံပါတ်ရွေးထိုးလို့ ရတာကို သဘောကျတယ်။ ဒီပုံစံကို ချဲသမား ၂လုံးသမား တွေလည်း ကြိုက်ကြမယ်ထင်တယ်။
အောင်ဘာလေထီ ရောင်းကောင်းတော့ နိုင်ငံတော် အခွန်ရတာပေါ့။ ပေါက်ရင်လဲ ပြေးမှာမပူရဘူး။ ဒိုင်ပြေးလို့ဖြစ်မဲ့ပြဿနာမရှိဘူး။ ရောင်းတဲ့သူတွေလည်း ထိုက်သင့်တဲ့ အမြတ်ရှိမှ ရောင်ဖို့စိတ်ဝင်စားမယ်ထင်တယ်။ ထိုးတဲ့သူတွေကလည်း ကိုယ့်ဝင်ငွေနဲ့ ကိုယ် ချင့်ချိန်ထိုးဖို့လိုပါမယ်။ ထီဆိုတာမျိုးက အင်မတန် ကံကောင်းမှသာ ပေါက်တတ်တယ်။ ထိုးတိုင်းမပေါက်တတ်ပါ။
ယခုလို ဝိုင်းပြီး ဆွေးနွေးပေးကြတာ များစွာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျား..။